Sweden oo markale ku guulaysatay tartanka heesaha ee Eurovision | Somaliska
Sweden ayaa markale ku guuleysatay tartanka heesaha ugu caansan Yurub ee lagu magacaabo Eurovision iyadoo uu guusha soo hooyay wiilka lagu magacaab Måns Zelmerlöw. Sanadkii 2012 ayaa waxaa Sweden u soo qaaday tartanka gabadha lagu magacaabo Loreen.
Heesta uu qaaday Måns oo lagu magacaabo “Heroes” ayaa guushii ugu weyneyd u soo hoysay Sweden ilaa sanadkii 2012. Sweden ayaa guud ahaan ku guuleysatay 6 jeer tartanka heesaha Eurovision ilaa sanadkii la bilaabay ee 1956 balse guusha.
Iyadoo la raacayo sharciga u yaala tartanka heesaha Eurovision ayaa Sweden waxay marti galin doontaa sanadka soo socda. Kaalinta 2-aad ayaa waxaa galay Ruushka oo la dhihi karo waxay ku hareen arimo siyaasadeed maadaama dad badan aysan jeclayn siyaasada Ruushka balse heesta ay qaaday gabadha ka socotay Ruushka ayaa waxaa qoray labo nin oo Swedish ah, iyadoo aan wax badan ka duwanayn mida uu qaady wiilka ka socday Sweden. Kaalinta 3-aad ayaa waxaa galay Talyaaniga.